Vhenekerai, haiwa imi: Ndiani anopa kutsigirwa kune zvakasikwa; kunobva kwavari vese: kunavose vanofanirwa kudzokera kwaari; "iro kumeso kweZuva rechokwadi, rakavanzika nechisviniro chegoridhe, kuti tigoona CHOKWADI, uye tiite basa redu rose, parwendo rwedu kuenda kuChigaro Chako Chitsvene."
Vol. 1 OCTOBER 21, 1904. Nha. 1
Iyi magazini yakagadzirirwa kuunza kune vese vanogona kuverenga mapeji ayo, iyo Tmessage yemweya. Mharidzo ndeyekuti munhu anopfuura mhuka mukupfekwa kwemachira — iye ndiMwari, asi humwari hwake hunogadzikwa, uye hwakavigwa mukati, mairi enyama. Munhu haana tsaona yekuzvarwa kana kutamba yemafumo. Iye isimba, musiki uye muparadzi wemhedzisiro. Kubudikidza nesimba riri mukati, iye anokunda indolence, kubuda kwekusaziva, uye kupinda munzvimbo yehungwaru. Ikoko achanzwa rudo kune ese anorarama. Achave simba risingaperi pane zvakanaka.
Ishoko rakashinga iri. Kune vamwe zvinoita senge zvisiri munzvimbo ino yakabatikana shanduko, nyonganiso, mafambiro, kusagadzikana. Asi isu tinotenda kuti ichokwadi, uye nesimba rechokwadi ichararama.
"Hachizi chinhu chitsva," muzivi wemazuva ano angati, "Huzivi hwekare hwazvitaura izvi." Chero zvingave zvataurwa nefungidziro dzepamberi, huzivi hwazvino hunetesa pfungwa nekufungidzira kwakadzidza, uko, kukaenderera mutsara. ichaisa kumarara isina chinhu. "Kufunga pasina," anodaro musayendisiti wezuva redu rekunyanya kuda pfuma, achitadza kuona zvikonzero zvinobva kwaari mafungiro. "Sainzi inondipa chokwadi chandinogona kuitira chimwe chinhu kune avo vanogara munyika ino." Sainzi yekudzivirira zvinhu inogona kugadzira mafuro akaorera, makomo akajeka, uye kuvaka maguta makuru munzvimbo yemasango. Asi sainzi haigoni kubvisa chinokonzera kusagadzikana nekusuwa, kurwara nechirwere, kana kugutsa zvishuwo zveomweya. Pane kusapindirana, sainzi yekudisisa inotsakatisa mweya, uye kugadzirisa zvakasikwa kuve cosmic guruva guruva. "Chitendero," anodaro wezvechitendero, achifunga nezvechaanodavidza, "chinounza kumweya meseji yerunyararo nemufaro." Zvitendero, kusvika parizvino, zvakadzamisa pfungwa; muise munhu kurwa munhu muhondo yeupenyu; akazadza nyika neropa rakadeurwa muzvibayiro zvechitendero uye akateurwa muhondo. Tichifunga nezvenzira yayo, dzidziso yezvouMwari yaizogadzira vateveri vayo, vanamati vezvidhori, vanoisa iyo isingagumi muchimiro uye voigumisa nehutera hwevanhu.
Zvakadaro, uzivi, sainzi, uye chitendero ndivo vanamukoti, vadzidzisi, ivo vanonunura vemweya. Uzivi hunowanikwa mune munhu wese; irwo rudo uye kushuvira kwepfungwa kuvhura uye kugashira huchenjeri. Nesainzi pfungwa dzinodzidza kubatanidza zvinhu kune mumwe nemumwe, uye kuvapa idzo nzvimbo chaidzo dziri muchadenga. Kubudikidza nechitendero, pfungwa dzinova dzakasununguka kubva pazvisungo zvadzo zvinoshamisira uye dzakabatana neUni Husingaperi.
Mune ramangwana, uzivi huchave hwakawanda kupfuura hwekuita zvemitambo hwepfungwa, sainzi inokurisa kudisisa pfuma, uye chinamato chichava chisina kujairika. Munguva inotevera, munhu achaita zvakanaka uye anoda hama yake sezvaanozvida iye, kwete nekuti iye achishuva mubairo, kana kutya gehena moto, kana mitemo yemunhu: asi nekuti achazoziva kuti chikamu chemumwe wake, kuti uye mumwe wake zvikamu zvezvizere, uye izvo zvakazara ndiye uyo: kuti haangatadzi mumwe pasina kuzvikuvadza.
Mukurwira kwekuvapo kwenyika, varume vanotsika-tsika mumwe nemumwe mukuyedza kwavo kuwana budiriro. Sezvo vazvisvika pamubhadharo wekutambura uye nekusuwa, ivo vanoramba vasina kugutsikana. Kutsvaga yakakodzera, vanodzingirira chimiro chine mumvuri. Mukubata kwavo, zvinopera.
Udyire uye kusaziva kugadzira kwehupenyu chiitiko chakajeka chehusiku uye pasi guva rinoona gehena. Kuungudza kwemarwadzo kusangana pamwe nekuseka kwevakomana. Mitsipa yemufaro inoteverwa nemasuru enhamo. Munhu anombundira uye anonamira pedyo nechinokonzera kuchema kwake, kunyangwe achibatwa navo pasi. Chirwere, mamiriri erufu, anorova pamasimba ake. Ipapo chinonzwika meseji yemweya. Iyi meseji isimba, yerudo, rerunyararo. Iyi ndiyo meseji yataizounza: simba rekusunungura pfungwa kubva mukusaziva, rusarura, nekunyengera; ushingi hwekutsvaga chokwadi mune zvese mafomu; rudo rwekutakurirana mitoro yeumwe neumwe; rugare runouya kune yakasununguka pfungwa, moyo yakavhurika, uye kuziva kwehupenyu husingagumi.
Vose vanogashira ngavapfuure neshoko iri. Mumwe nemumwe ane "Izwi" chimwe chinhu chekupa icho chinobatsira vamwe vanokokwa kuti vape mapeji awo.